बुद्धचित्तसहित सशस्त्र प्रहरीद्वारा चार जना पक्राउरामेछाप, रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिका १ स्थित खैरेनीघाट पुलबाट असार २७ गते सशस्त्र प्रहरीले १२ के.जी. बुद्धचित्तसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा काभ्रे जिल्लाको तिमाल गाउँपालिका ९ बस्ने ३८ वर्षिय डुप्साङ्ग थोकर, ३१ वर्षिय धिरज तामामङ्ग, ३५ वर्षिय रबिन लामा र २९ वर्षिय जगत तामाङ्ग छन् । उनीहरुलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म रामेछापबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीले शंका लागि जाँच गर्दा उनीहरुको साथमा उक्त बुद्धचित्त फेला पारेको हो । पक्राउ परेकाहरुलाई बरामद बुद्धचित्तसहित आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला वन कार्यालय रामेछापमा बुझाईएको छ ।
बुद्धचित्तसहित सशस्त्र प्रहरीद्वारा चार जना पक्राउ
रामेछाप, रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिका १ स्थित खैरेनीघाट पुलबाट असार २७ गते सशस्त्र प्रहरीले १२ के.जी. बुद्धचित्तसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा काभ्रे जिल्लाको तिमाल गाउँपालिका ९ बस्ने ३८ वर्षिय डुप्साङ्ग थोकर, ३१ वर्षिय धिरज तामामङ्ग, ३५ वर्षिय रबिन लामा र २९ वर्षिय जगत तामाङ्ग छन् । उनीहरुलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म रामेछापबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीले शंका लागि जाँच गर्दा उनीहरुको साथमा उक्त बुद्धचित्त फेला पारेको हो । पक्राउ परेकाहरुलाई बरामद बुद्धचित्तसहित आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला वन कार्यालय रामेछापमा बुझाईएको छ ।